Translate Kurdish (Kurmanji) to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Kurdish (Kurmanji) to Myanmar (Burmese), Kurdish (Kurmanji) to Myanmar (Burmese) translations, Kurdish (Kurmanji) to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Hûn çawa ne မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Li wir heye? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Ez ji we re pir hez dikim ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Ev mesrefê hamburger çiqas çi dike? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Ma tu dikarî bacê telefonî bikî? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Min bibore တဆိတ်လောက်
Ez mereqdar im ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Ez ketim derengî အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Ez li vir karsaziyê im ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Merheba navê min မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Ez şa dikim, lê ez zewicim ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Ez dixwazim ji we bipirsim ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Hûn dikarin ez li balafirgehê bikim? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Êdî wext e, kerema xwe? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Li qereqola herî nêzîkî ku li wir ye? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Ma dikarim kargeriya we ya we deyn bikim? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Rahênana leşî? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Ji min re vexwarin, ji kerema xwe? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Çiqas wê mesref dike? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ez bi tevlihevî bi tevlihevî ye ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Doktorek telefon bikin ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Doktor heye? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Gelo min telefonek heye? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Serê min ji kerema xwe banga min bistînin. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ev cihek pir başeဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Li min li otêlê bistînin ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Numreya min çi ye? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?